Fitsaboana radiôna Proton ho an'ny Lymphoma - Proton any California
Fitsaboana ny Lymphoma miaraka amin'ny fitsaboana Proton
Ady miady amin'ny Lymphoma miaraka amin'ny famaranana toa an'i Laser
Ny teknolojia fitsaboana beam miady amin'ny onjam-peo any California Protons dia fomba iray marim-pototra amin'ny fitsaboana amin'ny aretin'ny kansera izay ahafahan'ny dokotera mikendry andrana voafantina ao anatin'ny rafitry ny lymphatic voan'ny sela mikorontana.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha kokoa, ny teknolojia scan-vakana ny pensilihazo dia manome ny fikarakarana taratra ho an'ny lymphoma ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe izany rehefa mitsabo lymphomas akaikin'ny taova lehibe izay mahatsapa ny vokatry ny fitsaboana simika sy taratra. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Lymphoma tsy Non Hodgkin
Plasmacytoma (marobe myeloma)
Arovy ny fonao, ny havokavoka, ny nono ary ireo taova hafa eo akaikiny
Tazony ho tsara ny fiainanao mandritra ny fitsaboana
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana, anisan'izany ny fisalasalana, mandoa ary mandreraka
Tombontsoa azo avy amin'ny Proton Therapy ho an'ny lymphoma
Ny teknolojia fanodinam-baravarantsika amin'ny fantsom-baravarankely dia mifehy mivantana ny proton mba hametrahana ny tampon-tranon'i Bragg - ny fotoana nametrahany ny angovo faran'izy ireo indrindra - mivantana ao amin'ny fivontosana. Izany dia ahafahantsika mikarakara ireo fivontosana mihanaka be kokoa sy manova ny fatra ao anaty fivontosana.
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara amin'ny taratra avo lenta amin'ny fivontosan'ny homamiadana sy ny hozatra ao amin'ny rafitry ny lymphatic, ary mampihena ny fatra amin'ny manodidina ny taova salama sy ireo sela mihintsy. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny fitsaboana aram-bohitra Proton dia mametraka ny angovo faran'izay mihetsika mivantana ao amin'ny fivontosana, izay ahafahany miaro ny tavy mahasalama manodidina ny fivontosana ary mampihena ny fihanaky ny taratra amin'ny taova manodidina.
Ny marary lymphoma mandray fitsaboana proton dia mety hitranga amin'ny fiantraikany amin'ny voka-dratsin'ny taratra ary mihena ny mety hisian'ny kansera faharoa any amin'ny nono, havokavoka ary ireo taova hafa any aoriana.
Tsy toy ny teknolojia taloha, ny drafitry ny fitsaboana lymphoma dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny minitra vitsy. Ny fitsaboana ihany koa dia tsy misy dikany ary azo alain-tahaka ka ahafahan'ny marary miverina haingana kokoa amin'ny asany isan'andro.
Fitsaboana ny Proton
Ho an'ny Lymphoma
Mety aminao ve?
Miankina amin'ny sehatra, ny fitsaboana proton ho an'ny lymphoma dia mety ho fitsaboana fitsaboana ho solon'ny taratra X-ray mahazatra sy chimioteraly na afaka alefa miaraka amin'ny chimioteraly. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazana lymphoma, taona, ny fahasalamana ankapobeny sy ny safidin'ny tena manokana.
Ny homamiadana lymphoma mamerimberina
Fitsaboana fitsaboana Proton amin'ny valin'ny Lymphoma sy ny vokany maharitra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray mahazatra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hanimba ny fiainana toy ny aretim-po vokatry ny fikorontanan'ny taratra amin'ny ratra. Ny fitsaboana protonon dia manome ny mety hisian'ny mety ho an'ny kansera faharoa any aoriana any amin'ny fiainana noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy ny taova mahasalama manodidina anao.
Fikarohana fikarohana Manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny lymphoma
Ny tranga fitsaboana ho an'ny fitsaboana proton beam
Ny fitsaboana ny proton amin'ny fitantanana lymphoma tsy Hodgkin
Tranga manokana ho an'ny radioteran'ny proton beam; fanaintainana indray, lymphoma, ary ny homamiadan'ny nono
Ny fitsaboana Protonine amin'ny faritra subdiaphragmatic ao amin'ny fitantanana ny marary voan'ny lymphoma Hodgkin
Fampitahana ny dosimetika momba ny radiatera foton-tariby telo-dimensional miaraka amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana proton-miaro amin'ny nono amin'ny fitsaboana ny lymphoma Hodgkin amin'ny marary pediatrika vehivavy
Fampitahana tsimokaretina momba ny fomba fampidiran-dra telo samy hafa tafiditra ho an'ny marary lymphoma amin'ny sehatra II Hodgkin: ny radiatera mahazatra, ny radioteraky ny fanavaozana, ary ny radioterapi
Ny fampihenana ny fatra mahomby amin'ny rafitry ny fozika mampiasa proton raha ampitahaina amin'ny 3DCRT sy ny IMRT ao amin'ny lymphoma mediam-pananana
Radiotherapy ny protonia eo an-toerana ny lymphoma sinus-non-Hodgkin voalohany: tatitra momba ny raharaha
Rationale for and preliminary of proton beam therapy for mediastinal lymphoma